15 QODOB OO MUHIIM AH INAAD KU DADADAASHID SI AAD UGU GUULEYSATID GUURKAAGA IYO NOLOSHA DAMBE EE RAAXADA LEH | Gaaloos.com
Home » galmada » 15 QODOB OO MUHIIM AH INAAD KU DADADAASHID SI AAD UGU GUULEYSATID GUURKAAGA IYO NOLOSHA DAMBE EE RAAXADA LEH
15 QODOB OO MUHIIM AH INAAD KU DADADAASHID SI AAD UGU GUULEYSATID GUURKAAGA IYO NOLOSHA DAMBE EE RAAXADA LEH
15 Qodob Oo Muhiim Ah Inaad Ku Dadadaashid Si Aad Ugu Guuleysatid Guurkaaga Iyo Nolosha Dambe Ee Raaxada Leh…Asc waa muhiim guurku. waa sheyga kaliya ee makhluuqa ilaah ka siman yihiin marka laga reebo Malaa,ikta. waa furaha sii jiritaanka nolosha aadamiga waa hadafka inta nool hiigsato marka si uu guurga u noqdo mid guuleeysta waa inaan ogaanaa sheyga ugu ween ee guur loo galaa waa in farxad laga helaa Laakin dad badan ayaa qalad u fahmay oo u arkay in Riwaayad loo galo iyo guri ayaan leeyahay. lama diidano farxadda guurkaguurku inuu ka mid tahay farxada la raadinaayo, hadaba halkan waxaan idiinku soo gudbinayaa qodobo aan u arkay inay muhiim utahay farxada guurka
1-Farxad iyo liibaanta waa sheey qaali ah mudanna loo rafaado sidii loo heli lahaa. hadii ay farxada tahay inaad doorataa lamaana kula noolaada cimrikaaga inta ka harsan,lamaanahaasna uu kula fahmaa nolosha. ku dadaal doorashada lamaanahaga, si aad u hesho furaha farxada nolosha.
2-Noqo qof og Awoodiisa ku aadan inuu aqal dhiso,si fiicanna u hubi waxyaabaha kuu suurto gelin karo inaad mas,uuliyad qaadaa.
3-Noqo qof ay u caddahay wax uu ka rabo lamaanaha nolosha mustaqbalka.
4-ku dadaal inaa isku miisaanto fikirkaaga iyo caqlikaaga si aad u doorato lamaanaha kuu qalma.
5-Ka dhig tilmaamaha aad rabtid in laga helo lamaanahaaga kuwa suurto gal ah. ha ku riyoon dhalanteed.
6-Si fiican u daraasee lamaanahaaga,adigoo arurinaayo macluumaadka isaga ku aadan haday ahaan lahaayeen kuwo wanaagsan iyo kuwa xunba
7-Ogsoonoow inay muhiim tahay hadba sida aad ula dhacsan tahay uguna heshid lamaanahaaga.
8-Ha u daymo la,aanin inaad fiirisid farqiga idiin dhaxeeyo adiga iyo lamaanahaaga haday ahaan lahayd mid maadi ah ,mid bulsho, iyo mid aqooneed, si ay u siyaado isku xirnaatinaa iyo is fahamkiinaba.
9- Qiimayn ku samee tilmaam walba oo uu leeyahay lamaanahaaga adiga oo siinayo mid walba darajada ay mudan tahay.
10-Qiimayn ku samee shaqsiyadiisa, adiga oo fiirinaayo haduu munaasab u yahay inaad nolosha la wadaagi kartid, iyo hadaad awood u leedahay inaad kula noolaato iimaha (ceebaha) uu leeyahay iyo hadii kale.
11-Runta ka sheeg adiga oo naftaada qaldaynin , diyaar ma u tahay inaad ogolaato meelaha uu kaaga duwan yahay dabeecad ahaan lamaanahaaga.
12-La tasho Dadka aqoonta u leh arimaha qoyska, iyo Dadka khibrada u leh Nolosha guurka dabadeed , haday ahaan lahaayeen Ehelkaaga ama asxaabdaada, adigoo taladooda u miisaamaya si degenaan ah iyo caqli gal ah.
13-Ku dadaal sidii loo heli lahaa is fahan ka dhaxeeya labadiina qoys,si loo yareeyo khilaaf dhaca mustaqbalka dambe.
14-Haduu yahay lamaanaha qof aan kugu deegaan aheeyn (gobol ama wadan ama degmo) qiimeen ku sameey farqiga idiin dhaxeeo xaga caadada adigoo maankana ku haayo dhibaatada ka dhalan karta caadada kala duwan.
15- Ku dadaal inaad ogaatid sababta runta ah ee ka dambeesay in uu dumo gurigiisa hore haduu lamaanaha horay guur u soo maray.Hadii ay jiraan ilmana waa laga maarmaan inuu ogaado qofka kale mas,uuliyada kaga aadan caruurtaasi.
Waxaan rajeenaa inaan helay amaba aan gaaray hadafkaan ka lahaa maqaalkaan, ee aheed inaan walaalaheeyga soomaaliyeed gaarsiiyo 15kan naseexo.
Waxaan ka codsanaa walaalaha inay iga raali noqdaan hadaan qaladaad xaga qoraalka ah,ama xaga luqada ah aan sameeyay ,taasoo keeneeso in lagu dhibtoodo aqrinta,iyo fahamka maqaalka
Title: 15 QODOB OO MUHIIM AH INAAD KU DADADAASHID SI AAD UGU GUULEYSATID GUURKAAGA IYO NOLOSHA DAMBE EE RAAXADA LEH